အဓိက မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာ အဆင့်များ၊ နယ်ပယ် (Domain)၊ လောက (kingdom)၊ မျိုးပေါင်းစု (phylum)၊ မျိုးပေါင်း (class)၊ မျိုးစဉ် (order)၊ မျိုးရင်း (family)၊ မျိုးစု (genus)၊ မျိုးစိတ် (species)။ မြေခွေးနီ၏ ဇီဝဗေဒ မျိုးရိုးခွဲပုံအဆင့်များကို ဤပုံတွင် နမူနာအနေဖြင့် ယှဉ်ကြည့်နိုင်ရန် ပြထားသည်။
"Towardsanatural system of organisms: proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya" (1990). Proc Natl Acad Sci USA 87 (12): 4576–9. doi:10.1073/pnas.87.12.4576. PMID 2112744. PMC:54159. Bibcode: 1990PNAS...87.4576W. Retrieved on 11 February 2010.